Ogaden News Agency (ONA) – Cadaadiska uu Gumaysigu Kuhayo Shacabka S. Ogadenya oo Siibadanaya.
Cadaadiska uu Gumaysigu Kuhayo Shacabka S. Ogadenya oo Siibadanaya.
Posted by Dulmane	/ February 21, 2016
Ciidanka Gumaysiga Ethiopia ee wadanka ogadenia u jooga dabar gaynta dadka shacabka ah een Waxba galabsanin ayaa lagu soo waramayaa in ay aaseen ceel biyood ay dadka xoolo dhaqatada ah kacabi jireen iyagoo xoolo dhaqatadiina u gaystay dhibaatooyin kala duwan.
Warkan oon kahellay Wariyaha Wakaalada Wararka Ogadenia ONA uga soo warama Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO ayaa sheegaya in markay taariikhdu ku beegnayd 18/2/2016 ay ciidanka wayaanahu aaseen ceelka shiniile oo kamid ah deegaanada hoostaga Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay.
Ceelkan oo ahaa ceel biyood ay dadka xoolo dhaqatada ah aad uga cabaan ayay ciidanka gumaysigu aaseen xilli Habeen ah ooy dadku hurdaan. Falkan naxariis darrada ah ee ciidanka cadawgu sameeyeen ayaa sababay in ay xoolo badan uhayaamaan deegaan kafog si ay biyo u helaan halka ciyaal da’a yar iyo dad waayeel ahna ay oon iyo haraad ugu rafaadsan yihiin deegaankoodii ay daganaayeen.
Dhinaca kale ciidanka Woyaanaha ayaa bilaabay mid kamid ah dhaqamadii caadiga u ahaa oo ah in ay Gibir ama baad ka qaadaan dadka shacabka ah ee Somalida Ogadenia.
Warkan ayaa intaas kudaraya in amarka xaqdarada ah ee kasoo baxay hogaanka ciidanka wayaanaha uu sheegayo in qofka ganacsada ah laga qaadi doono 10.000 Birr halka ganacsiga yar yar laga qaadi doono 1000 Birr oo lacagta Ethiopia ah sidookale amarka ayaa qofka caadiga ah ku qoray 15 bir sidookale neef ka geella ah ayaa laga qaadi doonaa 100 bir halka lo’da iyo dameerahana laga qaadi doono 50 bir waxaana adhi kasta oo xaraysan laga qaadi doonaa hal neef oo nool.
Warka ayaa intaas kudaraya in ay ciidanka Wayaanahu fadhiisanayaan ceelasha si ay u fuliyaan amarada kasoo baxay horjoogayaasha ciidanka wayaanaha ee kusugan Ogadenya.